Ireo mpamokatra sy mpamatsy areti-mifindra - orinasa mpamindra areti-mifindra any Shina
Fitsapana antigen HSV 12
INTRODUKSION HSV dia rakotra, virus misy ADN misy morphologically mitovy amin'ireo mpikambana hafa ao amin'ny genes Herpesviridae. Karazana roa miavaka antigenika no ekena, ny karazana 1 sy ny karazana 2. HSV karazana 1 sy 2 dia matetika voarohirohy amin'ny aretin-tratra amin'ny lava-bava. , ny hoditra, ny maso ary ny taovam-pananahana, ny areti-mifindra amin'ny rafi-pitabatabana afovoany (meningoencephalitis) ary ny areti-mifindra mavesatra ao amin'ny neonate ny marary immunocompromised koa, na dia ...
Ny fitsapana haingana an'ny StrongStep® Neisseria gonorrhoeae Antigen dia immunoassay mikoriana haingana eo an-dàlam-pandrosoana ho an'ny famaritana antigen Neisseria gonorrhoeae antigen amin'ny fehin-kibo vozon-tranonjaza sy vehivavy vozon-tranonjaza. Soa azo avy amin'ny fahatsapana avo lenta (97.5%) sy ny fahaiza-manavaka avo lenta (97,4%) araka ny valin'ny 1086 tranga fitsapana ara-pahasalamana. Haingana 15 minitra fotsiny no ilaina. Toro-lalana Fomba iray-dingana hahitana mivantana ny antigen. Tsy misy fitaovana Ireo hopitaly mametra na loharanom-pahalalana ...
Fitsapana ny fizahana mialoha ny homamiadan'ny vozon-tranonjaza sy ny homamiadana
Fampiasana an-tsokosoko The StrongStep® HPV 16/18 Antigen Rapid Test Device dia immunoassay haingana amin'ny fahitana mialoha ny valin'ny oncoproteins HPV 16/18 E6 & E7 amin'ny karazan-tsavony vozon-tranonjaza vehivavy. Ity kit ity dia natao hampiasaina ho fanampiana amin'ny famaritana mialoha ny homamiadan'ny vozon'ny tranonjaza sy ny homamiadana. FAMPIDIRANA Any amin'ny firenena an-dàlam-pandrosoana, ny homamiadan'ny vozon-tranonjaza dia antony lehibe mahatonga ny fahafatesan'ny vehivavy voan'ny homamiadana, noho ny tsy fisian'ny fampiharana ny fitiliana fitiliana mialoha ny homamiadan'ny vozon-tranonjaza sy ny ca ...
FAMPIASAANA INDRINDRA Ny fitaovana mahery momba ny testStore StrongStep® Strep A haingana dia haingana ho an'ny fitiliana kalitao ny antigene Group A Streptococcal (Group A Strep) avy amina tenda swab ho fanampiana ny fitiliana ny vondrona A Strep pharyngitis na ho fanamafisana ny kolontsaina. FANAMBARANA Ny vondrona Beta-haemolytic B Streptococcus dia antony iray lehibe mahatonga ny aretin'ny taovam-pisefoana ambony amin'ny olombelona. Ny aretin'ny vondrona A Streptococcal izay matetika mitranga dia ny pharyngitis. Ny fambara an'io, raha tsy voatsabo ...
StrongStep® Strep B antigen Rapid Test dia immunoassay haingana amin'ny fahitana mialoha ny antigen Group B Streptococcal amin'ny fivaviana vava. Tombontsoa Haingana haingana 20 minitra ilaina amin'ny valiny. Tsy manafika na milay ny fivaviana na ny vozon-tranonjaza dia OK. Manam-pahaizana Tsy mila fitaovana manokana. Ny hafanan'ny efitrano fitehirizana fampahalalana momba ny fahatsapana 87,3% Ny fahamendrehana 99,4% Fahamarinana 97,5% CE misy marika Kit Size = kitapo 20 File: Manuals / MSDS ...
Fampiasana an-tsokosoko StrongStep® Trichomonas Vaginalis Antigen Rapid Test dia natao ho an'ny fitiliana antigens Trichomonas vaginalis (* Trichomonasw) antigens avy amin'ny swab fivaviana. Ity kit ity dia natao hampiasaina ho fanampiana amin'ny fitiliana ny aretina Trichomonas. FANAMBARANA Ny aretin'ny trichomonas dia tompon'andraikitra amin'ny aretina azo avy amin'ny lahy sy ny vavy (vaginitis na trichomoniasis) eran-tany. Trichomoniasis dia antony iray lehibe miteraka aretina noho ny marary rehetra ...
The StrongStep® StrongStep® Trichomonas / Candida test haingana Combo dia immunoassay mikoriana haingana avy eo noho ny fahitana mialoha ny trichomonas vaginalis / candida albicans antigens avy amin'ny swab. Tombony haingana 10 minitra fotsiny no ilaina. Mitsitsia fotoana sy vidiny Fitsapana iray ho an'ny aretina roa amin'ny swab tokana. Hamarina miaraka miaraka amin'ny mampiavaka ny diseaes roa. Ny mpampiasa-mora Mora tanterahina sy adika amin'ny personnels momba ny fahasalamana rehetra. Fitehirizana ny mari-pana amin'ny efitrano manokana ...
Kitapo fitsapana Igm / Iggrapid, Vibrio Cholerae O1 / O139 Antigen Combo Fitsapana haingana, H. Pylori Ag Rapid Test dia mamantatra ny antigen, Kitapo fitsapana antigona Coronavirus, Coronavirus ho an'ny fitsapana Covid-19, Fitsapana haingana momba ny Coronavirus Ket,